Ndụmọdụ maka ịhọrọ ngalaba n’ụzọ ziri ezi | ECommerce ozi ọma
Ndụmọdụ maka ịhọrọ ngalaba n’ụzọ ziri ezi
Ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ ịmalite a azụmahịa azụmaahịa n'ịntanetị anyị kwesịrị iburu n’uche ihe ọ bụ ngalaba na otu o si enyere anyi aka. ka ịmalite ngalaba ịntanetị bụ aha pụrụ iche nke na-egosipụta weebụsaịtị na ịntanetị.
Ebumnuche ya bụ sụgharịa adreesị IP n'ime aha ndị nwere ike icheta enwere ike ịchọta ya n'ụzọ dị mfe. Nke a pụtara na ọ bụ ọrụ maka onye ọ bụla jikọrọ na ịntanetị iji nweta weebụsaịtị ha chọrọ, dịka ọmụmaatụ mitiendaexample.com.es
1 Ngalaba jikọtara akụkụ abụọ:
1.1 Organizationtù aha:
1.2 Typedị nzukọ:
1.3 Ọnọdụ obodo:
Ngalaba jikọtara akụkụ abụọ:
Nke a na-eburu ya aha nke akara ma ọ bụ ụlọ ahịa anyị. Site na mbido ọ na-atụ aro ka ọ bụrụ okwu ọhụrụ ma ọ bụ okwu pụrụ iche site na nkebi ahịrịokwu iji zere inwe mgbagwoju anya na ibe ndị yiri ya ma ọ bụ ntụgharị ndị ọzọ. Ọ na-atụ aro ka ị na-eme a chọọ tupu ikwenye ngalaba gị iji jide n'aka na ọ bụ n'efu ma ọ bụ na-enweghị njikọ na ihe ọzọ.
Ọ bụ nganga na-ezo aka na ụdị ibe weebụ. Kacha nkịtị bụ .com, .net, .org, .edu. Peeji nke ebumnuche ya bu ahia aghaghi iji ngalaba .com
Dabere na mbara ala sitere na ibe ọ bụla, nke a nwere ike na- agwụcha .es, .us, .uk, ma ọ bụ nke kwekọrọ na mba ọ bụla. Nke a baara anyị uru nke ukwuu mgbe enyere ọrụ anyị na mba dị iche iche ma anyị nwere ọnụahịa, nkwalite ma ọ bụ katalọgụ dị iche iche maka nke ọ bụla. N'ụzọ dị otu a, anyị nwere ike ịnye nlekọta nke onwe anyị mba ụwa.
Debanye aha ngalaba ọ dị ka usoro ịdenye aha ụlọ ọrụ. Enwere ọtụtụ nhọrọ na ntanetị na-enye ọrụ a. Nke mbu anyi aghaghi ime lelee nnweta ngalaba wee mejupụta ụfọdụ ozi nkeonwe banyere onye na-ahụ maka ngalaba ahụ. N'ikpeazụ, anyị ga-akwụ ụgwọ afọ ọ bụla ma chere ka usoro ahụ gwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » mba » Ndụmọdụ maka ịhọrọ ngalaba n’ụzọ ziri ezi
Wzọ asaa itinye aka na azụmahịa
Kwụ ụgwọ na nkeji obere na e-azụmahịa